ချိန်းရှယ်ယာယခုအွန်လိုင်း Alphabet Inc. ဒီနေ့ GOOG ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်း, စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများ Alphabet Inc. ။
GOOG =2582.42 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
ယုံကြည်စိတ်ချရသောဒေတာဘေ့စ်များမှ Alphabet Inc. မှ အမေရိကန်တဒေါ်လာ မှစတော့စျေးနှုန်း။ Crypto လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားလုံးကို crypto လဲလှယ်စျေးကွက်တွင်ပြုလုပ်သည်။ စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုကိုးကားသည်။ 1 စတော့ရှယ်ယာ Alphabet Inc. သည်2582.42 ၏စတော့ရှယ်ယာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ Alphabet Inc. ဒီနေ့ကုန်ကျစရိတ်2582.42 စတော့ရှယ်ယာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ကုန်ကျသည်။ Alphabet Inc. နှုန်းဟာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ -9 ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်း၏ရာဂဏန်းထက်လျော့နည်းသွားသည်။
Alphabet Inc. ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာတန်ဖိုး အမေရိကန်တဒေါ်လာ
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်က Alphabet Inc. ကို2601.84 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောသုံးလက Alphabet Inc. ကို2965.41 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက်ရောင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က Alphabet Inc. အတွက် ၀ ယ်နိုင်သည် 1 927.51 ၏စတော့ရှယ်ယာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ စတော့စျေးနှုန်းဇယားကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ -0.75% - Alphabet Inc. ၏တစ်ပတ်ကို အမေရိကန်တဒေါ်လာ - စတော့စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲ။ တစ်နှစ်အတွင်း Alphabet Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ စတော့စျေးနှုန်းကို 33.98% ကပြောင်းလဲခဲ့သည်။
စတော့ရှယ်ယာကိုးကား Alphabet Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ
GOOG သို့ အမေရိကန်တဒေါ်လာ (USD)
1 GOOG2582.42 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
5 GOOG 12 912.10 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
10 GOOG 25 824.20 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
25 GOOG 64 560.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
50 GOOG 129 121 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
100 GOOG 258 242 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
250 GOOG 645 605 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
500 GOOG 1 291 210 အမေရိကန်တဒေါ်လာ
မင်းဝယ်နိုင် 10 ၏စတော့ရှယ်ယာ များအတွက် Alphabet Inc. အတွက် 25 824.20 အမေရိကန်တဒေါ်လာ မင်းရှိရင် 64 560.50 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ထို့နောက် ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းစုဗြိတိသျှအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို သူတို့လဲလှယ်နိုင်သည် 25 ၏စတော့ရှယ်ယာ Alphabet Inc. ။ ဒီနေ့မင်းပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် 50 ၏စတော့ရှယ်ယာ များအတွက် Alphabet Inc. အတွက် 129 121 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဒီနေ့ 100 ၏စတော့ရှယ်ယာ Alphabet Inc. ကိုလဲလှယ်နိုင်သည် 258 242 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ဒီနေ့ 250 ၏စတော့ရှယ်ယာ Alphabet Inc. အတွက် ၀ ယ်နိုင်သည် 645 605 အမေရိကန်တဒေါ်လာ သင်ရောင်းနိုင်ပါတယ် 1 291 210 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် 500 ၏စတော့ရှယ်ယာ Alphabet Inc. ။
စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ GOOG သမိုင်း
ဒီနေ့ 27 ဇန္နဝါရီလ 2022 Alphabet Inc. =2582.420 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ 26 ဇန္နဝါရီလ 2022 Alphabet Inc. ၁ ခု၏စတော့ရှယ်ယာ2584.800 အမေရိကန်တဒေါ်လာ 25 ဇန္နဝါရီလ 2022 Alphabet Inc. =2534.710 အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။ အများဆုံး Alphabet Inc. အတွက် အမေရိကန်တဒေါ်လာ စတော့စျေးနှုန်း ပေါ်လာသည် 24/01/2022 Alphabet Inc. အမေရိကန်တဒေါ်လာ 05/20/2019 တွင် အမေရိကန်တဒေါ်လာ - 05/20/20192601.840 SPAN> အမေရိကန်တဒေါ်လာ ။
Alphabet Inc. ၏တစျခုမှာဝေစုကိုယနေ့2582.42 $. ဝေမျှမယ်စျေးနှုန်း GOOG ယခင်ကုန်သွယ် နေ့မှစ. -0.0922% သို့မဟုတ် -2.38 USD သို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ 258 242 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် Alphabet Inc. 100 ရှယ်ယာဝယ်ခြင်း, သို့မဟုတ် 129 121 အမေရိကန်တဒေါ်လာ အတွက် GOOG ၏ 50 ရှယ်ယာများကိုရောင်းချနိုင်ပါတယ်။
ဗျည်းအက္ခရာ Inc မှအင်တာနက်အကြောင်းအရာထုတ်ကုန်များနှင့်တွင်ကျယ်စွာတစ်ဦးပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏၎င်း၏ suite ကိုရှာဖွေရန်, အန်းဒရွိုက်, Youtube, Apps ကပ, Maps ကို & ကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်။